Magacyada qaar ka mid ah dadka ku dhintay qarax ka dhacay Kismaayo | Berberanews.com
Home WARARKA Magacyada qaar ka mid ah dadka ku dhintay qarax ka dhacay Kismaayo
Magacyada qaar ka mid ah dadka ku dhintay qarax ka dhacay Kismaayo
Kismaayo(Berberanews):- Wararka ka imaanaya magaalada Kismayo ayaa sheegaya in maleeshiyo loo maleynayo inay ka tirsan yihiin ururka al-Shabaab ay weerar ku qaadeen hotel Mariidiyaanka ee Ex-Cascaseey, oo ku yaalla badhtamaha magaalada Kismaayo.
Gaadhi walxaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa lagu weeraray hotelka, ka hor inta aysan rag hubeysan gudaha u gelin. Ciddamada ammaanka Jubbaland ayaa weerarka ka jawaabaya, waxaana la sheegaya in uu dagaal dhex marayo kooxihii weerarka soo qaaday iyo ciidamada ammaanka.
Wixii faahfaahin ah oo ka soo kordha qaraxaas iyo weerarkaas Kismaayo ka dhacay caawa, waxaannu idinkula wadaagi doonnaa wararka dambe.
Previous articleBeel ka mida Beelaha collaadu ku dhexmiraysay Ceel-afweyn oo hub iyo gaadiid dagaal ku wareejisay dawladda
Next articleMasuulliyiinta Berbera oo ka warbxiyay kormeer ay ku tegeen deegaannada Gobolka